Home News MW Waare oo kulankii sadaxaad oo qarsoodi ah la qaatay MW Farmaajo!...
MW Waare oo kulankii sadaxaad oo qarsoodi ah la qaatay MW Farmaajo! Maxaa laga hadlay?
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo maalmahan dambe ku sugnaa Magaalada Muqadishu ayaa galabta waxa uu kulankiisii sadaxaad mudo todobo cesho gudahooda ah kula yeeshay Villa Somaliya Madaxweyne Farmaajo. Kulankaan oo ay ku wehliyeen Madaxweyne Ku Xigeenka Dowlad Goboleedka Hirshabeele Cali Guudlaawe iyo Wasiirka Isgaarsiinta ee Dowlada Fedraalka Eng. Canshuur ayaa ah mid si qarsoodi ah loo qaban-qaabiyay. MW Waare ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu sidoo kale kulan qarsoodi ah la qaatay RW Kheyre. MW Waare ayaa u muuqda mid ka ganacsanaayo qadiyadda Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda isaga oo ka dhuumanaayo madaxada kale ee Dowlad Goboleedyadda. MOL oo la xirirtay qaar ka mida mas’uuliyiinta xafiiska Ra’isal Wasaaraha iyo Madaxweynaha ayaa sheegay in kulankii galabta uu la yeeshay MW Farmaajo uu daba socday kulankii xalay uu la yeeshay RW Kheyre.
RW Kheyre ayaa waxa uu xalay balan qaaday in uu bixinaayo lacag joogta ah oo gaareyso $500,000 (shan boqol oo kun doolar) bilkastaa oo si qaasa loo siinaayo MW Waare hadii uu ka soo ga’o Ururka Iskaashiga Dowlad Goboleedyadda. MW Waare oo lagu yaqaano musuq-maasuq iyo dhaca xoolaha dadweynaha ayaa ah shaqsi aan laheyn damiir uu kaga xishoodo beenta. Waxaa horay dacwad uga tiilay Ha’adda laanqeeyrta Cas (ICRC) oo uu lacag uu ka lunsaday, lacagtaas ayuu guryo uga gatay dalalka Imaaradka iyo Kenya.
Sida uu maanta u sheegay MW Farmaajo oo la xisaabtamay MW Waare ayaa ku yiri ” .. mudo ku siman sidood bilood gudahood waxaa kuugu maqan oo ay dowlada ku siiyay $1,950,000 (hal milyon iyo sagaal boqol iyo kontan kun) mana jirto cid aad wax ka sisay ama shaqo aad ku qabatay hadana waxaad codsanaysaa lacag kale, miyaadan naga xishoonaynin”
MW Waare ayaa u sheegay saaxibadiisa ku dhaw-dhaw in uusan ka bixi doonin kana tanaasuli doonin qadiyadda Dowlad Goboleedyadda laakiin MW Farmaajo iyo Kheyre lacagta kaga qaadayo. MW Waare waxa uu yiri “aniga waa ay u qaldamayaan, sida aad wax u aragtaana wax uma jiraan”. Xildhibaan ka mida xildhibaanadda Fedaraalka ayaa u sheegay MOL ” MW Waare dhaawaca uu dowlada gaarsiin karay waa uu gaarsiiyay, wax uu hadda u qaban karaana ma jirto lakiin lacagta ayuu ka furanayaa……laakiin ma filaayo in MW Farmaajo sidaa u caqli xun yahay oo lacag siin doono Waare” Dhanka kale MW Waare ayaa ka bixtaankiisa uu ka baxayo isbahaysiga Dowlad Goboleedyadda aan waxba soo kordhin doonin mar hadii afarta Dowlad Goboleed kale ay meel ka soo wada jeedaan.
Previous articleCarabey oo beeniyay in Xilka laga qaaday
Next articleGuddoomiyaha G/Banaadir oo fariin udiray Shacabka Soomaaliyeed
Rag hubeysan oo toogasho ka geystay MUQDISHO
Maxamuud sayid Aadan oo Garbahaareey Kusii Jeeda!!